Home sunland casino
France meriri Croatia dị na Russia iji nweta akara nke abụọ nke ụwa FIFA, na-emeri 4-2. Nke mbụ bụ na ala ụlọ na 1998. Oge a, onye isi France bụ Emmanuel Macron nọ n’aka na Luzhniki Stadium dị na Moscow iji weghaara ihe agha ahụ na Paris, ebe ụbụrụ football na-egbu ndị bi na ya.
Egwuregwu, njedebe nke atọ nke ụwa na France na Croatia na mbụ, bụ nke ikpeazụ na-atọ ụtọ, ihe, dị ka FIFA kwuru bụ ihe kwesịrị ekwesị na mgbakọ ahụ.
N’agbanyeghị na Croatia nwere ihe ka ukwuu n’ime ihe ndị dị na mmalite, France na-ebute ụzọ n’ọtụtụ ọnọdụ. Ọ bụ Mario Mandzukic kpuchiri Antoine Griezmann nke nweere onwe ya na French n’aka ụgbụ ya.
Ivan Perisic na-eji nwayọọ nwayọọ na-agba mbọ site na nsọtụ ebe ikpe ahụ, ma ọ ga-agbanye site na dike gaa na-eme ihe ọjọọ. A na-ejikwa Croatia No4 wepụta cross site na French n’akụkụ aka nri, na-akwụ ụgwọ mgbe a VAR nyochaa.
Mgbe oge ahụ gasịrị, France mụbara ụzọ ha site n’aka Paul Pogba, bụ ndị ọrụ ya na asọmpi kwesịrị ịbụ ihe mgbaru ọsọ na njedebe ya. Mgbe Kylian Mbappe gbatịrị agbachitere Croatian, Griezmann legidere Pogba, bụ onye gwụchara mgbe ọ hụrụ mbọ mbụ o gbochibidoro.
Mgbe ike na-agwụ ike ya na-agba ọsọ Croatia, ọ dị mma na Mbappe n’onwe ya na-enwetụ akwụkwọ ahụ, na-akụda mgbalị siri ike site na nsọtụ mpaghara ikpe ahụ nke Danijel Subasic guzoghị ohere ọ bụla.
Mgbe ahụ, Mandzukic meriri otu net ahụ, mana oge a ka ọ bara uru na Croatia, na onye France na-elekọta Hugo Lloris na-eleghara anya ya anya iji belata ụkọ.
Na njedebe, nnukwu ihe ọ bụla No17 mere ka ọ ghara ịmaliteghachi na Croatian n’ụzọ ọrụ ebube, ndị Bleus na-eṅomi ndị dike ha 1998 – gụnyere onye nkụzi Didier Deschamps – na ịchekwa aha nke abụọ nke ụwa.
Tags: 2NDCUPfrancehotIsimbidoISIMBIDO POSTisimbido postsisimbido tvisimbidopostISIMBIDOPOSTSISIMBIDOTVLATESTnewnewsSECONDupdateWINWINNERWORLDWORLD CUPWORLDCUP
CITY DI NJIKERE IKWADEBE LIVERPOOL ATO